Home News maxaa sabab u ah in dib loo dhigo Doorashada Madaxtinimo ee Maamulka...
maxaa sabab u ah in dib loo dhigo Doorashada Madaxtinimo ee Maamulka Koonfur Galbeed
Guddiga doorashada koofur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah shaaciyay in aysan qabsoomi karin doorashada koofur Galbeed xiligii lagu balamay oo ku beegneed 5ta bishaan (afar maalmood kadib) sidaas darteedna lagu daray 14 cesho oo hor-leh.
Sababta dib u dhaca doorashada ayaa lagu sheegay in aysan magaalada maalmaha ka dhiman doorashada ku imaan karin madax Soomaali iyo ajaaniib ah oo loogu tala-galay iney kor-joog ka noqdaan doorashada Madaxweynaha ee Koofur Galbeed taasina ay sabab u tahay dib dhacaan kale ee maanta la shaaciyay.
Inkastoo ay gudiga waqtiga dib u dhigeyn ayaa hadane waxaa jira walaac ay xoog leh oo ay qabaan dadka dorsa doorashada kofur Galbeed kuwaas oo sheegaya in uusan gudiga madaxbanaaneen oo lagu haayo fargelin, taasina ay sababtay in la cabsi geliyo Murashaxiinta iyo Xildhibaanada koofur Galbeed qaarkood.
Murashaxiinta qaar ayaa ka raja dhigay in doorasho xur iyo cadaalad ah ay ka dhacdo Koofur Galbeed waxaana cadaadis xoog leh lagu haayaa Murashaxiinta ugu cad-cad doorashada maamulkaaasi.
Previous articleMaxaa Baydhabo Ciidanka Federaalka loo geeyey, Garoowe lama geynine.?
Next articlekulan ay yeelan lahaayeen Xildhibaanada Baarlamaanka oo markale baaqday Maanta
Somali special forces rescue 33 child kept hostages by insurgents